Iphepha lasekhaya-Lixele ngoku
Nje omnye site WordPress
Ukukuxhasa kuthintelo lokunganyaniseki kunye nokuziphatha gwenxa emsebenzini
Ukuziphatha okungahambi kakuhle kubiza iinkampani ehlabathini lonke iibhiliyoni zeedola ngonyaka. Imibutho eneziko elizimeleyo elisebenzisa umnxeba lisika ilahleko yobuqhetseba kwisiqingatha.
INKXASO ENDLINI IMFUNDO NOHLAHLELO
IBESPOKE NENKQUBO YOLAWULO LWETyala I-ETHICSPRO®
IIYURE ezingama-24 NGOMHLA, IINSUKU EZISIXHENXE IVEKI
Yixele ngoku ™ ixhobisa ishishini lakho ngezixhobo zokwazisa ngendawo yokusebenza engenakho ukunganyaniseki nokuziphatha gwenxa.
Yixele ngoku ™ isebenza nawe kunye neshishini lakho ukwenza inkcubeko yokunyaniseka nokuthembeka. Uphando lubonisa ukuba nenombolo yomnxeba ezimeleyo nefihlakeleyo yomnxeba opholileyo okanye inkqubo esekwe kwiwebhu ngempumelelo iwunciphisa umngcipheko kwindlela yokuziphatha engalunganga, enjengobuqhophololo okanye ukuxhaphaza.
Sidibanisa umnxeba wethu wokunika ingxelo kunye nemfundo, inkxaso, kunye nohlalutyo oluqhubekayo ukukunceda ufezekise imeko yokuziphatha yabasebenzi bakho, ngelixa kwangaxeshanye, sibakhuthaza ukuba baxele naziphi na iindlela zokuziphatha gwenxa ngendlela engaziwayo, ekhuselekileyo nefihlakeleyo.
Jonga yethu umthetho wabucala.
bobuqhetseba emsebenzini ifunyenwe yincam
yengeniso yemibutho eqikelelwa ukuba ilahlekile ngenxa yobuqhetseba minyaka le
kunokwenzeka ngakumbi ukuba abasebenzi baqokelele iingcebiso ukuba imibutho iyaphumeza uqeqesho lokwazisa ngobuqhetseba
I-EthicsPro® -Khuselekile, ayaziwa, kulula
Ngaba ishishini lakho litsha kwi-EthicsPro®? Ngaba ufuna ukufumana ulwazi ngakumbi?
Ukufikelela kwiincwadana zethu zemiyalelo, nceda ucofe apha ngezantsi.
Ukufikelela kwiincwadana ze-ethicspro®
Qaphela: La maxwebhu anokuthintela ukufikelela. Ukuba awuqinisekanga ukuba nguwe lo, unengxaki yokugqitha, okanye ucinga ukuba uyawafuna la maxwebhu, nceda Qhagamshelana nathi.
Yichaze ngoku i-hotline evulekileyo yokubonelela inike abasebenzi bethu inkqubo ekhuselekileyo, ezimeleyo apho banokunika ingxelo yokuziphatha gwenxa. Kwimveliso apho ubuqhetseba bunokwenzeka khona, inkonzo yabo isigcinele amawaka eedola kule minyaka idlulileyo.
- Iivenkile zokudlela
Nxibelelana nathi ukuze uqalise
Singathanda ukunceda nangayiphi na indlela esinakho ngayo. Sishiye umyalezo kwaye siza kubuyela kuwe ngokukhawuleza. Ngenye indlela, nceda usitsalele umnxeba usebenzisa le nombolo ingezantsi.
Yenze ingxelo ngoku ™ Ltd
IZiko leMeyile laseWaikato
Silapha ukukunceda. Yenza ingxelo
Ilungelo lokushicilela © 2021 · Ngema